Patiala လည်ဆွဲ၏ Maharajah - HIGH JEWELLERY DREAM
Patiala လည်ဆွဲ, Cartier, 1928 ၏ Maharajah
ပလက်တီနမ်၊ အဟောင်းနှင့်နှင်းဆီပန်းစိန်များ (ကွင်းဆက်များနှင့်ကွင်းဆက်များ)၊ ကူရှင်ပုံအဝါရောင် zirconia တစ်လုံး၊ အဖြူရောင် zirconias ၄ ခု၊ အဖြူရောင် topazes ဆယ်ခု၊ ဒြပ်ပတ္တမြား ၂ ခု၊ smoky quartz တစ် citrine တစ်ခုဖြစ်သည်။ Patiala မှ Maharajah Sir Bhupindra Singh အတွက်ဖန်တီးထားသည်။
Bhipendra Singh, Patiala မှ Maharajah, လည်ဆွဲဝတ်ဆင်။
အဆိုပါ Patiala လည်ဆွဲ အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့လည်ဆွဲဖြစ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Maison Cartier 1928. ခုနှစ်တွင်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည် Patiala ၏ Bhupinder Singh က, ထို့နောက်အာဏာရ Maharaja ၏ပြည်နယ်၏ Patiala.
လည်ပင်းတွင်စိန်ပေါင်း ၂,၉၃၀ ပါ ၀ င်သည်။ ၄ င်း၏အဓိကကျသောအရာအဖြစ်ကမ္ဘာ့သတ္တမမြောက်အကြီးဆုံးစိန်ဖြစ်သော“ De Beers” အပါအ ၀ င်စိန် ၂၉၃၀ ပါရှိပြီး ၄၂၈ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောအလေးချိန်ရှိပြီးနောက်ဆုံးချိန်တွင် ၂၃၄.၆၅ ကာရက်ရှိခဲ့သည်။
ထိုပန်းချီကားတွင် ၁၈ ကာရက်မှ ၇၃ ကာရက်ရှိအခြားစိန် ၇ လုံးနှင့်မြန်မာပတ္တမြားများစွာပါရှိသည်။
လည်ဆွဲသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
1982 ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး မှာ Sotheby ရဲ့ ဂျီနီဗာမြို့တွင်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုတွင်ဒေါ်လာ ၃.၁၆ သန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောလည်ဆွဲအစိတ်အပိုင်းကိုလန်ဒန်ရှိလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်တစ်ခုမှအမည်မသိ ၀ ယ်သူတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျန်ရှိသောကျောက်မျက်ရတနာကြီးများပျောက်ဆုံးနေသည်။ အထူးသဖြင့်မြန်မာပတ္တမြားများအပြင် ၁၈ မှ ၇၃ ကာရက်ရှိကျောက်တုံးများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောကျောက်တုံးများဖြစ်သည်။
Cartier သည်မပြည့်စုံသောလည်ဆွဲကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီး ၄ နှစ်အကြာတွင်မူလနှင့်ဆင်တူသည်။ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားသောစိန်များကို cubic zirconia နှင့် synthetic စိန်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီးမူလ De Beers စိန်၏ပုံတူကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
Tags:Cartier • စိန်ပွင့် • သမိုင်းဝင် • အိႏၵိယ
မှတ်ချက်3ခုPatiala လည်ဆွဲ၏ Maharajah"
Pingback: ချမ်းသာသူကိုပင်ဆင်းရဲစေမည့်အိန္ဒိယတော်ဝင်မိသားစုများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ -
Pingback: 豪華豪華！世界世界ーー .ーーーーー။ ။ ။ ။ ။ .ー။ ။ .ーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーem ラッツကျောက်မျက်ရတနာမဂ္ဂဇင်း